Fampisehoana: fomba mora hamonoana fivoriana | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 14, 2009 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
dia miaraka a fampisehoana PowerPoint mahatsiravina. Jean Palmer Heck dia mpandahateny ampahibemaso ary mpanazatra miteny kabary iza no nizara ny bokiny, Penguins, Vorombola ary Pancakes miaraka amiko. Boky mahafinaritra ho an'ny PowerPoint izy io voailika… Izaho izany.
Amin'ny lafiny tsara, ny slide PowerPoint-ko dia nivoatra rehefa nandeha ny fotoana ary manaraka fanao tsara indrindra aho amin'ny fanovana tsirairay. Ity misy tokotanin-tsipika farany zarao amin'ny Fampiroboroboana ny programa ataonao bilaogy ao amin'ny Fampahalalana Walker Heveriko fa ohatra mahafinaritra amin'ny fampisehoana mahafinaritra… miaraka amin'ny torohevitra tsara hananganana fampisehoana mahafinaritra.
Ny torolàlana an'i Jean dia manome ny raikipohy voaporofo, ny fomba, ny fambara ary ny hevitra amin'ny famolavolana fampisehoana PowerPoint tsara kokoa. Satria ny sary dia ampahany manakiana tokoa amin'ny famolavolana fampisehoana tena tsara - ny torohevitro manokana dia ny handany fotoana kely iStockphoto mahita sary mazava tsara izay manohana ny vaovao tadiavinao hampitaina.
Mandany vola amin'ny sary mahafinaritra - fampiasam-bola lehibe izany!
Tags: alexei kapterevny fahafatesan'i powerpointPower Pointfampahafantaranaslideshare
Araho ireo mpanoratra marobe miaraka amin'ny Google Analytics
Mar 14, 2009 ao amin'ny 2: PM PM
Fomba iray hafa ahafahana mahita sary dia ny fanaovana fikarohana avo lenta ao amin'ny Flickr miaraka amin'ny boaty "Fikarohana Creative Commons" voamarika.
Ataovy azo antoka fa manaraka ny toromarika momba ny fampiasana sy ny atribut ianao.
Gaga aho fa niaina ela be tamin'ny famelabelarana mahatsiravina hitako.
Eto amin'ny tontolo tsara kokoa. 😀